FAQs | Fonosana Beyin | orinasa mpanamboatra kitapo sakafo
1, orinasa ve ianao sa orinasa mpivarotra?
Izahay dia orinasa iray, izay miorina ao amin'ny faritany Liaoning any Sina, tongasoa eto mba hitsidika ny Factory.
2, inona ny MOQ anao?
Ho an'ny vokatra vita vita, ny MOQ dia 1000 pcs, ary ho an'ny entana namboarina dia miankina amin'ny habe sy ny fanontana ny volavolanao. Ny ankamaroan'ny akora dia 6000m, MOQ = 6000 / L na W isan-kitapo, matetika manodidina ny 30.000 pcs. Arakaraka ny andoavanao vola no hampihena ny vidiny.
3, Manao asa oem ve ianao?
Eny, izany no asa lehibe ataontsika. Azonao omena anay mivantana ny volanao, na azonao omena anay ny fampahalalana fototra, afaka manao endrika maimaimpoana ho anao izahay. Ankoatr'izay, manana vokatra efa vita vita ihany koa izahay, tongasoa ny manontany.
4, Inona ny ora fanaterana?
Miankina amin'ny volavolanao sy ny habetsanao izany, fa mazàna dia afaka mamita ny kaontinao ao anatin'ny 25 andro aorian'ny fanamafisana ny endrika sy ny fametrahana.
5, Ahoana no ahafahako mahazo teny nalaina marina?
Ampahafantaro ahy aloha ny fampiasana ny kitapo mba hahafahako manoro anao ireo fitaovana sy karazany mety indrindra, ohatra, ho an'ny voanjo, ny fitaovana tsara indrindra dia ny BOPP / VMPET / CPP, azonao atao ihany koa ny mampiasa kitapo taratasy vita amin'ny asa tanana, ny ankamaroan'ny karazana dia mijoro kitapo, misy varavarankely na tsy misy varavarankely arak'izay ilainao. Raha azonao lazaina amiko ny fitaovana sy ny karazana tadiavinao dia izay no tsara indrindra.
Faharoa, ny habe sy ny hateviny dia tena zava-dehibe, izany dia hisy fiantraikany amin'ny moq sy ny vidiny.
Fahatelo, ny fanontana sy ny loko. Afaka manana loko 9 farafahakeliny amin'ny kitapo iray ianao, ny habetsaky ny loko anananao ihany no hampiakatra ny vidiny. Raha manana ny fomba fanontana marina ianao, dia ho tsara izany; raha tsy izany, pls omeo ny fampahalalana fototra tianao hatao pirinty ary lazao anay ny fomba tianao, dia hanao endrika maimaim-poana ho anao izahay.
Forth, habetsahana. Arakaraka ny maha-mora azy.
6, mila mandoa vidin'ny varingarina isaky ny manafatra aho?
Tsia. Ny vidin'ny varingarina dia fotoana iray ihany, amin'ny manaraka raha toa ka mamerina mandamina endrika mitovy amin'ny kitapo ianao, dia tsy mila filan-drindrina intsony. Miorina amin'ny haben'ny kitapo sy ny volony famolavolana ny varingarina. Ary tazominay mandritra ny 2 taona ny varingarinareo alohan'ny handaminana indray.
7, Inona avy ireo karazana fomba fandoavam-bola ekenao?
Amin'ny ankapobeny dia fametrahana 50% aorian'ny fanamafisanay ny famolavolana ary ny fandoavam-bola feno alohan'ny fanaterana. Azonao atao ny mandoa amin'ny TT, carte de crédit, PayPal, Western Union, Assurance varotra, sns.
8, Ahoana ny vidin'ny fandefasana?
Ny vidin'ny fandefasana dia samy hafa arakaraka ny lanjany sy ny teny nofidinao. Raha ny mahazatra ho an'ny kargôo ambanin'ny 100kg, dia manoro hevitra anao izahay hisafidy ny express, toa ny DHL, FedEx, UPS, sns, raha 100-500kg dia tsara kokoa ny sambo amin'ny alàlan'ny rivotra, raha toa ka mihoatra ny 500kg dia an-dranomasina no mety. Azontsika atao koa ny manao DDP ho anao raha tianao.
Ny fiovan'ny vidin'ny fandefasana amin'ny lanjany, ny fe-potoana ary ny fotoana samihafa dia hahita ny vahaolana tsara indrindra ho anao izahay alohan'ny fanaterana.
9, Inona avy ireo rakitra ekenao amin'ny endriny?
Manaiky ny AI, PDF, PSD, sns, izay rakitra azonao aseho amin'ny sosona ny endriny voalohany. Afaka manampy mamorona endrika ho anao koa izahay.
10, Manome serivisy aorian'ny varotra ve ianao?
Eny Mazava ho azy. Voalohany, hanamarina hatrany hatrany izahay alohan'ny fanaterana, ao anatin'izany ny kalitao, ny habetsany, ny fonosana sns, ary andramana izay fara herinay hanomezana antoka fa afaka mahazo kitapo fonosana tsara indrindra ianao. Aorian'ny handraisanao azy ireo dia afaka manome sosokevitra momba ny fomba famenoana, famehezana ary hitazomana azy ireo izahay. Ankoatr'izay, raha vao misy olana kalitao momba ny kitaponay, dia handray ny andraikitra rehetra tokony horaisinay izahay, hifandray aminao am-pitiavana ary hahita ny vahaolana tsara indrindra ho anao.